“အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးစဉ်က မိုးကလျာရဲ့ စိတ်အတိုင်းနေခဲ့ရလို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေအရမ်းများခဲ့ကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခင်သဇင် | CeleTrend
ရုပ်လေးချောပြီး စိတ်နှလုံးသားလေးလည်း ဖြူစင်တဲ့ မင်းသမီးလေး ခင်သဇင်ကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခင်သဇင်က လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်သဇင်က လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း မိုးကလျာဆိုတဲ့ ဗီလိန်ကာရိုက်တာကနေ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အမှတ်တရတွေကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ရင်ဖွင့်ရဦးမယ်သိလား ?? ဒီကားမှာ ဝလာတယ်ပြောကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲကားကိုရိုက်ရင်း ၁၅ ပေါင်တက်သွားခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိုးကလျာရဲ့စိတ်ကို အမှီလိုက်ရလို့ပါ။ သူဖြစ်ချင်တာတွေက သိပ်များတယ်။ စိတ်ကြီးတယ်။ လောဘကြီးတယ်။ အညှိုးကြီးတယ်။ အပြင်က ခင်သဇင်ကတော့ အေးဆေးပဲဆိုတော့ ဒီ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ မိုးကလျာရဲ့ ဖြစ်ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေနောက်ကို အမှီလိုက်ရတာ အရမ်း stress စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များခဲ့တယ်။ မိုးကလျာရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ရှုပ်ထွေးမှုတွေ များစွာနဲ့ မွန်းကျပ်ပြီး မပျော်ရွှင်ခဲ့ရဘူး။ အဲဒါကြောင့် ခါတိုင်း ရှူတင်တွေထက် ပိုစားခဲ့တယ်။ ”
“မိုးကလျာဖြစ်ပြီးတိုင်း ရှုတင်ပြီးတဲ့ အချိန်တိုင်းရဲ့ ထွက်ပေါက်ကစားတာပဲ။ နေ့ညတွေ ရိုက်ခဲ့ရတော့ နေ့ရော၊ ညရော အသေတွေစားခဲ့တယ်။ gym သွားချိန်လည်းမရှိ။ ပြန်လာရင် ထိုးအိပ်နဲ့။ ရိုက်ကူးရေးကာလ ၅ လကျော်လောက်မှာ ဝိတ်က ၁၅ ပေါင် အထိ တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ ၁၅ ပေါင်ကို ပြန်ချထားပါပြီ။ နောက်တစ်ခါ စိတ်ကြီးတဲ့ ကားတွေ ရိုက်ရင် ရေလုံပြုတ်စားမှ ဖြစ်ပါတော့မယ်။ ကိုယ့် အဆီတွေကို ပြန်မြင်နေရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူးတကယ်” ဆိုပြီး ပြောပြလာပါတယ်။
ခင်သဇင်ကတော့ မိုးကလျာဆိုတဲ့ ဗီလိန်ကာရိုက်တာကနေ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်း ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မိုးကလျာကို ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးနော်။
Source: Khin Thazin’ s fb
ရုပျလေးခြောပွီး စိတျနှလုံးသားလေးလညျး ဖွူစငျတဲ့ မငျးသမီးလေး ခငျသဇငျကို ပရိသတျကွီးအားလုံး ကွိုကျနှဈသကျအားပေးကွမယျ ထငျပါတယျ။ ခငျသဇငျက လယောဉျမယျတဈယောကျအဖွဈကနေ အနုပညာနယျပယျထဲကို ရောကျရှိလာခဲ့သူဖွဈပွီး ရုပျရှငျနဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှမှော သရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ခငျသဇငျက လကျရှိ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ “အခဈြဖှဲ့လညေငျး” ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး မိုးကလြာဆိုတဲ့ ဗီလိနျကာရိုကျတာကနေ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး အမှတျတရတှကေို အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ခဈြပရိသတျကွီးကို ရငျဖှငျ့ရဦးမယျသိလား ?? ဒီကားမှာ ဝလာတယျပွောကွတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ အဲကားကိုရိုကျရငျး ၁၅ ပေါငျတကျသှားခဲ့တယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိုးကလြာရဲ့စိတျကို အမှီလိုကျရလို့ပါ။ သူဖွဈခငျြတာတှကေ သိပျမြားတယျ။ စိတျကွီးတယျ။ လောဘကွီးတယျ။ အညှိုးကွီးတယျ။ အပွငျက ခငျသဇငျကတော့ အေးဆေးပဲဆိုတော့ ဒီ ဇာတျရုပျဖွဈတဲ့ မိုးကလြာရဲ့ ဖွဈခငျြနတေဲ့ စိတျတှနေောကျကို အမှီလိုကျရတာ အရမျး stress စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားခဲ့တယျ။ မိုးကလြာရဲ့ ရငျထဲမှာလညျး ရှုပျထှေးမှုတှေ မြားစှာနဲ့ မှနျးကပျြပွီး မပြျောရှငျခဲ့ရဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ခါတိုငျး ရှူတငျတှထေကျ ပိုစားခဲ့တယျ။ ”
“မိုးကလြာဖွဈပွီးတိုငျး ရှုတငျပွီးတဲ့ အခြိနျတိုငျးရဲ့ ထှကျပေါကျကစားတာပဲ။ နညေ့တှေ ရိုကျခဲ့ရတော့ နရေ့ော၊ ညရော အသတှေစေားခဲ့တယျ။ gym သှားခြိနျလညျးမရှိ။ ပွနျလာရငျ ထိုးအိပျနဲ့။ ရိုကျကူးရေးကာလ ၅ လကြျောလောကျမှာ ဝိတျက ၁၅ ပေါငျ အထိ တကျသှားခဲ့ပါတယျ။ အခုတော့ အဲဒီ ၁၅ ပေါငျကို ပွနျခထြားပါပွီ။ နောကျတဈခါ စိတျကွီးတဲ့ ကားတှေ ရိုကျရငျ ရလေုံပွုတျစားမှ ဖွဈပါတော့မယျ။ ကိုယျ့ အဆီတှကေို ပွနျမွငျနရေတာ စိတျမခမျြးသာဘူးတကယျ” ဆိုပွီး ပွောပွလာပါတယျ။
ခငျသဇငျကတော့ မိုးကလြာဆိုတဲ့ ဗီလိနျကာရိုကျတာကနေ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျခဲ့ရငျး ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး “အခဈြဖှဲ့လညေငျး” ဇာတျလမျးတှဲထဲက မိုးကလြာကို ဆကျလကျအားပေးကွပါဦးနျော။